जुन घरमा महिलाले सबेरै गर्दछन् यी काम, माता लक्ष्मी आफै आएर गर्दछिन् बास – Sandesh Press
May 14, 2021 443
काठमाडौँ । कोही व्यक्तिको कुण्डलीमा ग्रह सम्बन्धी केही दोष भएमा भाग्यले साथ दिँदैन । कुण्डलीको दोषाबाट टाढा रहनका लागि ज्योतिष शास्त्रमा कयौँ उपाय अपनाउन सकिने शास्त्रले बताएको छ ।
ब्राह्मो मुहूर्ते संजाग्रच्छि वा पंकज यथा ।
स्त्री मान्छेले विहान सबेरै उठेर यस्ता काम गर्दा वैभव प्राप्त हुने शास्त्रले जनाउँछ । विहान सवेरै उठेर पूजा पाठ गर्दा त्यसको पुण्य पतिलाई पनि मिल्ने विश्वास गरिन्छ। ज्योतिषले केही यस्ता उपाय बताएका छन्। जुन उपाय स्त्रीले अपनाउदा उनका पतिको दुर्भाग्य हटेर भाग्यले साथ दिने विश्वास गरिन्छ।
स्नान आदि कर्म पश्चात सफा वस्त्र लगाएर घरको मन्दिरमा पूजा गर्नुपर्दछ । पूजामा तामाको भाँडोमा पानी भरेर राख्नु पर्दछ । पूजापछि उक्त भाँडोमा राखेको जल अशोकको पातले घरको मुख्य द्वारमा तथा पुरै घरमा छिट्नु पर्दछ। त्यसपछि तुलसीमा एक भाँडो जल चढाउनु पर्दछ। यस गर्दा सुख, सन्तुष्टि र बैभव मिल्ने विश्वास गरिन्छ ।
Prevआउने दिन नेपालको लागी अझै खतरा।यस्तो आयो डरलाग्दो सुचना।भुलेर पनि यस्तो नगर्नुहोला
Nextआज अक्षय तृतीया अर्थात जौँको सातु खाने दिन, यी काम गर्दा मिल्छ लाभ
विमान दुर्घ’टना भएको ३६ दिनसम्म पाइलट जिउँदै! गोही र सर्प भरिएको जंगलमा कसरी बाँचे ? हेर्नु’होस्..